ILagoon View Retreat - I-Airbnb
ILagoon View Retreat
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguShey
UShey ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-92% yeendwendwe zakutshanje.
Umbono omhle we-lagoon kunye neSiqithi saseManagaha ziimpawu ezenza le propati ibonakale. Yonwabela imbono esuka kwichibi lamanzi anetyuwa angenasiphelo njengebhonasi eyongezelelweyo kule ndawo yokuphumla yokuphumla. Le yunithi 'Yonke Entsha' ngo-2018 (ulwakhiwo kunye nezinto eziluncedo). Indawo yethu 'yesiphelo sendlela' ingasese, izolile kwaye izolile kodwa yimizuzu emi-5 ukuya kweli-10 kuphela ukuya kwindawo enomtsalane (ukhenketho olunokuzikhethela, idolophu yaseGarapan, ivenkile, ikhasino, iilwandle). Okona kulungileyo kuwo omabini amazwe!
Iyunithi inokufikelela ngaphandle kwenyathelo.
Ibhedi inobukhulu bendlovukazi kwaye ibhedi yesofa yisayizi epheleleyo esongwayo.
Itafile yekofu ingasebenza njengendawo yokusebenzela.
Ikhitshi lixhotyiswe ngetoptop enezitshisi ezibini, i-oven microwave, umenzi wekofu, iipani zokuqhotsa, imbiza yesuphu, iipleyiti, iimagi zekofu, iiglasi zesiselo, izinto zokutya nezokupheka, iimela, itoti yokuvula, ibhodi yokunqunqa kunye nezitya zokugcina iplastiki.
Ifriji iza nezitya zamanzi.
Sibonelela ngolwelo lokuhlamba izitya kunye nesitovu esiphezulu sokucoca.
Ichibi lamanzi etyuwa: Ekubeni ifuna i-chlorine ukuba yongezwe, akukho vumba le-chlorine, akukho kuhlaba kwamehlo, akukho kucaphuka kwesikhumba, kwaye akukho mpahla yokuhlamba efakwe i-bleached.
Igumbi lokuhlambela eligcweleyo elinesifudumezi samanzi ashushu kwishawa kunye netephu yokuhlambela, ikwanendawo enkulu yokugcina izinto zangasese.
Ibekwe kwindawo esembindini, le ndawo ikude nje kumqolo (obaleka emantla/emazantsi ecaleni kweSaipan) ofikelela nokuba ngasempumalanga okanye ngasentshona. Sizilungisile iindlela de safikelela kwiimitha ezingama-300 zokungena kwindlela yomhlaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Shey
Njengababuki zindwendwe, uShey kunye noBill baya kufikeleleka ngokulula kwaye bajonge phambili ekwabelaneni ngeengcebiso zokwandisa amava esiqithi. Ngeminyaka engama-37 ehlangeneyo yamava kushishino lokonwabisa kunye nokwamkela iindwendwe eSaipan, sijonge ekwabelwaneni ngeendawo zokuphumla, ukutya, ukunyuka, okanye ukubona indawo, kuxhomekeke kukhetho lwakho. Amava ethu asenze sanxulumana nabakhenkethi abazikhethelayo kwaye sijonge phambili ekukukhombiseni kwicala elililo - ukuba uyacelwa.
Njengababuki zindwendwe, uShey kunye noBill baya kufikeleleka ngokulula kwaye bajonge phambili ekwabelaneni ngeengcebiso zokwandisa amava esiqithi. Ngeminyaka engama-37 ehlangeneyo…